Xuutiyiinta ayaa qirtay in xoogaggoodu ay dab ka kiciyeen xaruntii muhaajiriinta Yemen - Wardeeq 24 TV Xuutiyiinta ayaa qirtay in xoogaggoodu ay dab ka kiciyeen xaruntii muhaajiriinta Yemen Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Xuutiyiinta ayaa qirtay in xoogaggoodu ay dab ka kiciyeen xaruntii muhaajiriinta Yemen
Xuutiyiinta ayaa qirtay in xoogaggoodu ay dab ka kiciyeen xaruntii muhaajiriinta Yemen
Falaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa qirtay in ciidamadooda ay sababeen dab ay ku dhinteen 45 qof xarun muhaajiriinta horaantii bishaan, iyagoo sheegay in in ka badan toban askari iyo saraakiil ay wajahayaan ciqaab.
Ciidamada amniga ee Xuuthiyiinta ayaa ka jawaabey mudaaharaad ka dhacay xarunta lagu hayo Sanca 7-dii Maarso iyaga oo bilaabay seddex haamood oo sunta dadka ka ilmeysiisa ah iyagoon wax ogolaansho ah ka helin taliskooda, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wakaaladda wararka ee fallaagada Saba.
Isbaheysiga Sacuudiga ayaa duqeymo cirka ah ka bilaabay caasimada Yemen ee Xuutiyiinta
Mid ka mid ah saddexda [qasacadaha] ayaa ku degay joodariga xumbada, taasoo keentay dab si dhaqso leh ku faafay, ”ayaa lagu yiri.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in 11 ka mid ah ciidamada amaanka xabsiga la dhigay, iyadoo ay wehliyaan tiro saraakiil sare ah, isla markaana maxkamad la soo taagi doono.
Falaagada ayaa sheegtay in 45 muhaajiriin iyo qaxooti ah oo badankood Itoobiyaan ah lagu dilay dhacdadaas in kabadan 200 oo dhaawac ah
Xuutiyiinta, oo ku xayiran dagaal lix sano soconaya oo ka dhan ah dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, ayaa usbuucii hore muujiyay “inay aad uga xun yihiin” dhacdadii ka dhacday xarunta lagu qabtay Sanca waxayna ballanqaadeen inay baari doonaan.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale ku baaqday in baaritaan madax-bannaan lagu sameeyo dabka.
Ergeyga Qaramada Midoobay ee Yemen, Martin Griffiths, ayaa u sheegay Golaha Amniga in “dabkii aan caadiga ahayn, ee aadka u xun” uu adduunka xusuusiyay “dhibaatada bulshada muhaajiriinta ah”.
Previous articleWaa Maxay Macanka Ama Sonkorowga Su’aalo iyo jawaabo caam ah
Next articleIsbaheysiga Sacuudiga ayaa duqeymo cirka ah ka bilaabay caasimada Yemen ee Xuuthiyiinta